निक जोनसको गीत बिलबोर्डको १ नम्बरमा, प्रियंकाले पाइन् कार उपहार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निक जोनसको गीत बिलबोर्डको १ नम्बरमा, प्रियंकाले पाइन् कार उपहार
एजेन्सी । अमेरिकी पप गायक तथा बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाका पति निक जोनस यतिबेला सफलताको शिखरमा छन् । निक जोनसले हालै उनका दाजु र भाइहरुसँग मिलेर एउटा म्यूजिक भिडियो एल्बम ‘सकर’ रिलिज गरेका थिए । उक्त म्यूजिक भिडियोमा अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र निक जोनसको केमिस्ट्री देखाइएको छ । यो गीत अहिले बिलबोर्डको हट १०० गीतहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ ।
आफ्नो गीत नम्बर १ मा पर्न सफल भएपछि निक जोनस निकै नै खुशी छन् भने अभिनेत्री प्रियंकाले आफ्नो खुशी ट्वीटरमार्फत व्यक्त गरेकी छिन् । प्रियंकाले ट्वीटमा लेखेकी छिन्, ‘जोनस ब्रदर्सको म्यूजिक भिडियो एल्बम ‘सकर’ बिलबोर्डको हट १०० गीतहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेको छ । योभन्दा बढी गर्वको कुरा अरु हुन सक्दैन ।’ निक जोनसले पनि एल्बमको सफलताको खुशीमा प्रियंका चोपडालाई निकै नै महंगो कार उपहार स्वरुप दिएका छन् ।
निकले प्रियंका चोपडालाई लगभग १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने मर्सि्डिज कार दिएका हुन् । प्रियंका चोपडाले उक्त कारसँगै पति निक जोनसका साथ तस्बिर खिचाउँदै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी छिन् । प्रियंकाले लेखेकी छिन्, ‘जब पति नम्बर १ बन्न सफल हुन्छन्, तब पत्नीलाई उपहारको रुपमा कार प्राप्त हुन्छ ।’यसरी जोनस ब्रदर्सको म्यूजिक भिडियोले रेकर्ड बनाएको यो दोस्रो पटक हो ।